FIARA NIVADIKA IN-DROA TENY BESELY MAHAJANGA : Mpandeha miisa 20 naratra mafy
Vokatry ny tsy fitandremana no azo ilazana ny loza nitranga teny amin’ny fokontany Besely ny alin’ny talata hifoha alarobia teo. 2 août 2018
Fiara avy any Marovoay izy io ary tena feno tanteraka. Tonga teny Besely dia vaky ny kodiarana aoriana ary avy hatrany dia niala lalana ity fiara sprinter miloko mavo ity. Tapaka ny famatorana entana tao ambony izay fantatra fa tena mavesatra tokoa satria nisy gonim-bary miisa 14 niampy ny entan’ireo mpandeha rehetra. Avy eo nivadika in-droa tany an-kady izay tsy lalina loatra izy ireo.
Mbola tafatsoaka ilay mpamily, hoy ny mpandeha iray fa ny mpandeha kosa tsy nisy afaka niala tao anaty fiara. Vokatr’izay, olona 20 no naratra mafy ary naiditra teny amin’ny hopitaly Androva. Tsy misy namoy ny ainy anefa izy ireo fa nisy ny vaky loha sy tapa-tanana. « Nandeha mafy ity fiara ity ary efa niezaka niteny azy izahay fa tsy nety mihitsy izy. Ny ankamaroanay rehetra dia naratra avokoa ary efa nisy nalefa nody », hoy ireo mpandeha nitantara ny zavatra nanjo azy ireo.
Teny amin’ny hopitaly moa ireo tena voa mafy no mbola manaraka fitsaboana fa izay efa nahazo fitsaboana mifanaraka tamin’ny ratra nahazo azy kosa dia nalefa namonjy ny tanàna niaviany avy. Tsy tazana teny ny mpamily ity fiara ity fa ny tompon’ny fiara no efa nandelo teny raha ny fitantaran’ireo mpandeha hatrany. Ireo naratra kosa moa dia fantatra fa ny fanjakana no mandray an-tanana ny fitsaboana azy ireo amin’izany. Raha atao ny tombana dia nitondra entana niampy olona tsy fandanja amin’ny vesatra tokony hoentiny no niteraka ny loza. Ilaina araka izany ny fahaizana mifehy ny vesatra sy ny lanjan’ny entana. Ny hafainganam-pandeha moa tsy tokony mihoatran’ny 80 kilometatra isan’ora.